ko htike's prosaic collection: ဒီမေးခွန်းတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုမေးနိုင်မလဲ
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုမေးနိုင်မလဲ
- ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ လူဦးရေရဲ့ ဘယ်လောက်ရာနှုန်း မဲထည့်မှ ဆန္ဒခံယူပွဲ အထမြောက်သလဲ။
- အထမြောက်တဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲပေးသူဦးရေရဲ့ ဘယ်လောက်ရာနှုန်းက ထောက်ခံမှ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ အတည်ပြုသလဲ။
- ယခု ဆန္ဒခံယူပွဲရဲ့ ရလာဒ်ဟာ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သလား။
- မဲပေးခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ ဆန္ဒခံယူပွဲမတိုင်မီ တရားဝင်သိခွင့်ရမလား။
- ကန့်ကွက်မဲပေးသူကို အရေးယူမှာလား။ ကန့်ကွက်မဲပေးဖို့ တရားဝင်စည်းရုံးခွင့်ရှိလား။
- ထောက်ခံမဲပေးဖို့ရော ဘယ်သူက စည်းရုးံမှာလဲ။ အဲဒီလူတွေက အစိုးရနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်မလဲ။
- ဆန္ဒခံယူပွဲ ကော်မရှင်လူကြီးဖြစ်ဖို့ ဘာအရည်အချင်းတွေလိုလဲ။ ဘယ်လိုရွေးတာလဲ။
- တကယ်လို့များ ဆန္ဒခံယူပွဲရဲ့ အဖြေအရ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်မပြုနိုင်သေးဘူး ဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ ပြန်ပြင်မှာလား..။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်မှာလား။
It is very good questions regarding REFERENDUM. The answers for these questions definitely help us to understand very well so we all can decide how to response.
I do appreciate for those, who write this article.
Naw San said....50%+1% population of citizen (above 18-age) must be participated in Referendum.(Because the soverein power of the state belongs to the citizens)
....Over 50% (absulte majority )of voters must be support the Referendum.( after only shall be exercised the soverign power, as provided for by this constitution)
免費卡通a片a片欣賞看a片av女優無碼影城觀月雛乃aa片a片論壇a片遊戲a片試看aa片免費看情色a片a片下載免費a片 無碼a片色情a片a 電影直播短片av女優線上觀賞小魔女免費影片hilive tv,免費電影☆ 臺灣妹妹情色自拍 ☆☆ 免費自拍情色電影 ☆小老鼠影片分享區情色文學自拍王☆ 自拍情色圖貼照片 ☆☆ 學生情色自拍 ☆☆ 純情色妹妹自拍 ☆免費色情短片線上觀看日本大奶女優影片交流,免費色情成人影片,sex貼片區免費檳榔西施摸奶影片免費色咪咪影片網,a片城,免費色情影片免費a片觀賞免費a長片線上看線上免費a片色咪咪影片網甜心寶貝貼影片av女優msn 聊天室入口台灣 yahoo 聊天室入口she say 聊天室入口tu 聊天室入口yahoo 聊天室入口聊天室入口 yamek21 聊天室入口ut 聊天室入口免費視訊聊天室入口情色電影院重車論壇☆♀ 愛愛影片 ☆♀☆♀ 一葉情成人貼圖片區 ☆♀☆♀ 夜激情成人聊天室 ☆♀
後官電影電影院 - 20jack美少女自拍貼圖男女情色寫真貼圖洪爺免費影城洪爺影城H漫-成人漫畫嘟嘟情人色網影片8comic無線動漫網性福免費影片分享航海王h短片分享彩虹頻道免費a短片成人做愛影片丁字褲性感影片性愛自拍貼圖區免費性愛影片下載無碼av直播室免費影片線上直播台灣a片王洪爺 影片下載區美國a片下載免費a片影片下載免費a片短片下載台灣美女寫真貼圖區girl5320 貼片貼圖區免費a片線上觀看卡通美女短片免費試看色妹妹貼片貼圖區色色小遊戲百分百貼影片區ut蟲蟲聊天室嘟嘟色情貼圖區69成人聊天室免費線上成人影片免費色情貼圖貼片007色情貼圖網米克成人情色論壇色情動漫貼片論壇微風成人交友論壇小說520聊天室小幻好玩遊戲區girl5320免費性愛影片成人影片 - sex貼片區伊利情色討論區383成人影城伊莉成人討論區歐美模特兒寫真歐美a免費線上看85cc成人片免費色咪咪影片網櫻井莉亞三點全露寫真集豆豆色情聊天室2009真情寫真日本偷自拍圖片女學生自拍電影貼片區999成人性站0951撥打電話下載成人電影下載網色情電影分享區洪爺色情電影免費色情小電影台灣色情電影下載站免費色情電影觀賞色情卡通電影免費下載色情電影免費下載免費下載色情電影免費成人片觀賞免費色情電影下載a圖網情色貼圖交流論壇小老鼠論壇夜玥論壇台灣論壇好玩遊戲區袍笑小老鼠論壇mcy論壇微風論壇短片區台灣論壇遊戲區依莉論壇線上成人影片論壇男人的最愛草莓論壇小老鼠分享論壇